Hiran State - News: Khubaro milatari oo Soomaali ah oo soo bandhigay qorshe awooda Alshabaab ee Hiiraan State lagu wiiqi karo.
Khubaro milatari oo Soomaali ah oo soo bandhigay qorshe awooda Alshabaab ee Hiiraan State lagu wiiqi karo.
Bishii August sanadka 2010-ka ayey aheyd markii Magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya looga dhawaaqay dowlad Goboleedka Hiiraan ( Hiran State of Somalia) oo odayaasha beelaha kala gedisan ee wada dega Gobolka Hiiraan ay u doorteen inuu Madaxweyne ka noqdo dowladda Dr. Maxamuud Cabdi Gaab .
Isla bisha August , waxaa xaflad balaaran oo lagu caleema-saarayay Madaxweyne Maxamuud Cabdi Gaab lagu qabtay Intercontinental Hotel ee Magaalada Nairobi , waxaana xafladaasi ka soo qeyb galay shaqsiyaad waa-weyn oo Soomaali iyo Ajnabi intaba leh .
Ujeedka dowlad Goboleed loogu sameeyay Hiiraan oo loo qeybin doono 3 Gobol oo kala ah Dhagax jibis,Deebley iyo koonfurta Hiiraan ayaa waxa ay aheyd inay bilow u noqoto nabad ka islaaxda Gobolada koonfureed iyo kuwa dhexe ee dalka Soomaaliya sidaasi waxaa yiri Mas’uul sare oo la taliye u ah Madaxweynaha Hiiraan.
Hiiraan – Goob istiraatiiji ah .
Gobolka Hiiraan ee haatan yeeshay dowlad Goboleed ayaa waxa uu ahmiyad balaaran ugu fadhiyaa Soomaaliya , isagoo ku yaala goob istiraatiiji muhiim ah , isagoo ah isku xiraha Gobolada dhexe iyo kuwa koonfureed oo ay ku jirto Caasimadda Muqdisho,Gobolka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia .
Hadaba , waxaa xaqiiqa ah in qofkii Maamulka Gobolkaas gacantiisa gala uu yahay maareeyaha koowaad ee dhaq-dhaqaaqyada ganacsiga iyo milatariga ee Soomaaliya .
Dadka Siyaasadda ka faalooda ayaa waxa ay ku sheegaan in arrinkaasi uu sabab u noqday in ciidamada Ethiopia ay ka soo talaabaan Xadka Gobolka Hiiraan uu la wadaago Kilinka Shanaad dhamaadkii sanadkii 2006, si ay dhabarka uga jabiyaan Xoogagii Maxkamadaha islaamiga oo loo arkay inay Qatar ku yihiin ammaanka qaranka wadamada bariga afrika , si gaar ah dalka Ethiopia .
Magaalada Baladweyne ee caasimadda Hiiraan ayaa noqotay Magaaladii ugu horeysay e ciidamo Ethiopian ay lugta soo geliyaan bishii December 2006 , waxa ayna arrinkaasi sabab u noqotay burburkii golihii Maxkamadihii islaamiga .
Hayeeshee istiraatiijiyadda Gobolka uu ku yaalo ayaa waxa ay sabab u noqotay inuu wajaho dhibaatooyin badan oo ah loolamo iyo dagaalo ka dhaxeeyay qeybaha ku colaadsan ee gudaha dalka Soomaaliya .
Loolamada ugu dhiiga badnaa ee Gobolka Hiiraan ay marto ayaa ah midka haatan weli ay lugta kula jirto , laakiin laga sugayo dowlad Goboleedka Hiiraan inay noqoto midda dhigaasi ku meerta biya saafi ah si aan gobolkaasi dib dambe colaad uga dhicin, nabadana loo adkeeyn lahaa iyo dowladnimada .
Waxaa ku wada dagaalamay Dhaq-dhaqaaqa “Alshabaab” iyo Xizbul islaam , waxayna awood siisay in Alshabaab ay la wareegaan gobolka , hubkana ay ka dhigaan Xizbul islaam oo hadda bur-buray .
18-kii June, sanadkii 2009 ayaa waxa wajahday Hiiraan maalin murugo leh , waxaa marqura geeriyooday Mas’uuliyiin badan waxaa ka mid ahaa wasiirkii Amniga qaranka ee dowladda FS Col. Cumar Xaashi Aadan,Safiirkii Soomaaliya ee wadamada koonfurta Afrika ku yaala C/kariin Faarax Laqanyo, tobaneeyo odayaal dhaqameed , Saraakiil milatari iyo dad rayid ah oo ku le’day dhammaantooda weerar ismiidaamin oo naftii hurre ka tirsanaa Alshabaab uu isku qarxiyay Hotel ay Mas’uuliyiintaasi ka joogeen Magaalada Baladweyne .
Dowlad Goboleedka Hiiraan oo la qorsheynayo in si dhameystiran Golaha Xukuumadda iyo Baarlamaanka loogu qeybiyo qabaa’ilada Soomaaliyeed ee wada dega Gobolka Hiiraan , ayaa inta aysan awood milatari ku qabsan Gobolkaasi ay qorsheyneysaa inay Magacowdo Taliyeyaasha Milatariga iyo Booliska , si ay u suura gasho in xilliga awood milatari ay ku qabsadaan Gobolkaasi gebi ahaantiisa laga sii dhaqan-geliyo Hey’adaha ammaanka , Cadaalada iyo asluubta oo u qaabilsan Xabsiyada sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay sheegayaan .
Lama shaacin ilaa iyo hadda nooca ciidamada ee ka howl geli doona Hiiraan , si looga ceyriyo halkaasi kooxda “Alshabaab” oo la aamisan yahay inay dib u dhigtay horumarkii gobolka uu hiigsanaa .
Dadka qaar ayaa waxa ay aaminsan yihiin in dowlad Goboleedka Hiiraan ( Hiran State of Somalia) ay ugu suura geli karto in Deegaanada ay ku heyb tirsato ay awood kala wareegi karto Alshabaab waa hadii ay u kaashato kolonyo ciidamo Ethiopian ah oo jiiri kara awooda Alshabaab ee qaababka dagaalka waddooyinka ( Street fighting tips).
11 Khubaro Milatari Soomaali ah oo diiday in magacyadooda la carabaabo ayaa waxa ay sheegeen in si fudud looga ceeyrin karo “Alshabaab” guud ahaan Gobolka Hiiraan, laakiin ay u baahan tahay in laga sii fikiro sidii loo adkeyn lahaa ammaanka guud ahaan Xuduudaha gobolkaasi si aaney mar dambe u soo laaban awooda Alshabaab,waxa ayna ku taliyeen in la baaro guryaha , bakhaarada iyo goobaha kale ee looga shakiyo inay ku qariyeen hubka iyo dagaalyahanadooda , si looga fogaado in gudaha Magaalooyinka ay dib uga abaabulaan weeraro qorsheysan oo awooda dowlad goboleedka Hiiraan dhantaali karta .
Waxaana hubaal ah in baaritaano joogto ah oo laga sameeyo kontroolada kala gedisan ee gobolkaasi ay ka qeyb qaadan doonto ceejinta ama neef ku xirida Xoogaga Alshabaab ee kala jooga Gobolada Sh/dhexe iyo Galgaduud .
Isha warka - Hiran State
· admin on December 28 2010 14:10:03 · 1 Comment · 2309 Reads ·
#1 | mahamud abdullahi consultant on January 11 2011 11:35:32
aad ayaan ugu faraxsanahay madaxweynaha cusub oo loo doortay gobalka HIIRAN waxaana filaa in uu waxyaaba badan kabadali doona dadka reer hiiraan
14,569,321 unique visits